कांग्रेसलाई बाबुरामको सुझाव: भाग्‍ने गल्ती नगरौँ, गाडी छुट्ला है ! – ramechhapkhabar.com
कांग्रेसलाई बाबुरामको सुझाव: भाग्‍ने गल्ती नगरौँ, गाडी छुट्ला है !
काठमाडौँ: पूर्वप्रधानमन्त्री तथा जसपाका नेता डा बाबुराम भट्टराईले केपी ओली नेतृत्वको सरकारविरुद्ध पहल लिन ढिलो गर्न नहुने बताएका छन् । ओली सरकारविरुद्ध पहल लिन ढिलो गर्दा प्रतिगमनको गाडी अकण्टक अघि बढ्दै गरेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई लक्षित गर्दै नेता भट्टराईले कुनै वहानामा भाग्ने गल्ती नगर्न पनि सुझाव दिएका छन् । ‘लखनौमा दुई नबाबबीच को पहिले गाडी चढ्ने भन्नेमा अन्योल हुँदा गाडी नै छुटेको’ लोक कहानीको प्रसंग उल्लेख गर्दै भट्टराईले प्रतिपक्षी दलहरुलाई संघर्ष गर्न पर्खन नहुने सुझाव दिए ।
‘पहले आप, पहले आप भन्दाभन्दै लखनौका नवावको गाडी छुट्थ्यो रे!विपक्षी दलहरूले एकअर्कालाई देखाएर ओली सरकारविरूद्ध पहल लिन ढिलो गर्दा प्रतिगमनको गाडी अकण्टक अघि बढ्दैछ! सत्तासीन शक्तिविरूद्ध संघर्ष केन्द्रित गर्नु बहुदलीय लोकतन्त्रको सामान्य धर्म हो!यो वा उ बहानामा भाग्ने गल्ती नगरौं!’ नेता भट्टराईले भनेका छन् ।
जसपा र सरकारबीच बालुवाटार वार्ता सकारात्मक, तर जुटेन सहमति
प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहित एमाले नेताहरु र जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसहितका नेताहरुबीच मंगलबार भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटवार्ता सकारात्मक भएको नेताहरुले प्रतिक्रिया दिएका छन् ।जसपा नेताहरुको मागप्रति प्रधानमन्त्री ओली सकारात्मक भएपछि जसपा नेताहरु प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न बालुवाटार पुगेका थिए ।
भेटमा जसपाको मागका विषयमा सकारात्मक छलफल भएको एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले बताए । यद्यपि छलफलबाट कुनै निष्कर्ष ननिस्किए पनि छलफल भने सकारात्मक भएको उनको भनाइ छ । ‘आजको भेट पनि यसअघिकै निरन्तरता हो,’ उपनेता सुवास नेम्वाङले भने, ‘छलफल सकारात्मक भएको छ। निष्कर्षमा पुग्न भने बाँकी छ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले जसपा नेताहरुको माग पूरा गर्न सरकार सकारात्मक रहेको भन्दै सत्ता साझेदारीको प्रस्ताव राखेका छन् । जसपा नेताहरुले पनि आफूहरुको माग सम्बोधन भए सरकारमा सहभागी हुने सकिने जवाफ दिएका छन् । जसपाले निर्वाचित सांसद रेशम चौधरीलाई रिहाइ गर्नु पर्ने, संविधान संशोधन गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेको छ।
सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादीलाई पूर्ववत अवस्थामा फर्काएपछि प्रधानमन्त्री ओली जसपाको समर्थनका सरकार टिकाउने दाउमा छन् । तर, सरकारलाई समर्थन गर्ने विषयमा जसपाभित्र विवाद छ । उपेन्द्र यादव र डा बाबुराम भट्टराई ओली सरकारसँग सहकार्य गर्न नहुने पक्षमा छन् ।